Favicon Generator: Maitiro Ekugadzira Favicon
Mugovera, October 11, 2008 China, June 25, 2015 Douglas Karr
Izvi zvingaratidzika sezvisingakoshi, asi pese pandinosvika pawebhusaiti yakanaka uye pasina inoenderana icon inodiwa inoratidzwa mubrowser, ndinoshamisika kuti nei basa racho risina kupera. Ichokwadi, yangu favicon haisi iyo inoshamisira… ini ndanga ndichida kungowana chimwe chinhu kumusoro chinosiyanisa saiti yangu kubva kune vamwe:
Yekutanga Favicon Setup
Kana iwe usati waisa favicon yewebhusaiti yako, zviri nyore zvinoshamisa. Nzira iri nyore ndeyekudonhedza icon icon inonzi favicon.ico mune dhairekitori remudzi webhusaiti yako. Yaimboita kutora icon zvirongwa senge Microangelo (a great icon development application) asi pane zvakanaka mamwe ma icon ekugadzira maturu pamhepo!
Ingo rodha chero faira remufananidzo kuDynamic Drive, buritsa iyo faira, uye uikande mudhairekitori rako remidzi. Ose mabhurawuza azvino anozotarisa uye kuratidza ino icon mune kero bar.
Yepamberi Favicon Setup
Kana iwe uchida kusimbisa yako saiti uye nekunyatso kugadzira icon yaunofarira, pane imwe misoro HTML iwe yaunogona kuisa.
Kana iwe uri kushandisa WordPress, iwe unogona kuwedzera iyo kodhi mune iyo header.php ye template yako mu chikamu.
Tags: animated faviconfaviconfavicon jenareta
BlueLock Vhidhiyo: Cloud Komputa
Gumiguru 12, 2008 pa 8:46 AM
Zano rakakura, Doug. Taifanira kuwedzera ipapo ipapo mashiripiti kune webhusaiti yedu 😉
http://abitofmagic.no/english - ikozvino ine animated favicon.
Gumiguru 12, 2008 pa 11:22 AM
Yakanaka kwazvo animated gif! Zvakanaka!
Gumiguru 12, 2008 pa 9:35 AM
Kugadzira favicon chaive chimwe chezvinodiwa zvewebsite yangu kugadzirisazve. Ndakasimbirira pazviri.
Gumiguru 12, 2008 pa 11:23 AM
Ini ndinofunga inofanirwa kunge iri pane ese saiti saiti, Patric. Ini ndakashanda nemufananidzo we graphic uyo akasarudzika mukugadzirwa kwemifananidzo uye hunyanzvi, zvakare!
Gumiguru 2, 2012 na7: 46 PM
Ndichiri kushandisa Microangelo. Muchiitiko chekuti iwe waisaziva, iwe unogona kupinza akati wandei saizi mufavicon saka KANA mumwe munhu achizvuzvurudza kudesktop (kana zvakafanana) hauna kunamira neiyo 16 × 16 vhezheni.
Gumiguru 2, 2012 na8: 20 PM
Ini ndaifanira kunge ndataura, nedudziro icon icon IS muunganidzwa wemhando dzakasiyana saizi. Iyo Favicon jenareta ichagadzirawo akawanda matete!